Speakers – ICT.com.mm
Echo Dot (4th Gen, 2020 release) | Smart speaker with Alexa | CharcoalK133,123
Anitech Portable Bluetooth Speaker V101 (Green)K19,000
Anitech Portable Bluetooth Speaker V101 (Red)K19,000
Anitech Portable Bluetooth Speaker V100 (Blue)K35,000
Echo Studio High-fidelity smart speaker with 3D audio and AlexaK595,053 K565,272-6%
﻿လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Wi-Fi connectivity: Dual-band Wi-Fi supports 802.11a/b/g/n/ac (2.4 and5GHz) networks. Does not support connecting to ad-hoc (or peer-to-peer) Wi-Fi networks. Meet the Echo Dot - Our...
Anitech Portable Bluetooth Speaker V101 (Green)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ သွားလေရာကို အလွယ်တကူယူဆောင်သွားနိုင်တဲ့ Anitech အမှတ်တံဆိပ် Portable Bluetooth Speaker V101 (အစိမ်း) ဖြစ်ပါတယ်။ အသံထွက် ကောင်းမွန်ဖို့အတွက် 4Ω3W ရှိတဲ့ စပီကာကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Micro SD card/ AUX/ USB flash drive/ FM စတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကို...
Anitech Portable Bluetooth Speaker V101 (Red)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ သွားလေရာကို အလွယ်တကူယူဆောင်သွားနိုင်တဲ့ Anitech အမှတ်တံဆိပ် Portable Bluetooth Speaker V101 (အနီ) ဖြစ်ပါတယ်။ အသံထွက် ကောင်းမွန်ဖို့အတွက် 4Ω3W ရှိတဲ့ စပီကာကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Micro SD card/ AUX/ USB flash drive/ FM စတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကို...
Anitech Portable Bluetooth Speaker V100 (Blue)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Anitech မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ခရီးဆောင် Portable Bluetooth Speaker V 100 (အပြာရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။5Watt ရှိတဲ့ စပီကာကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် အသံထွက် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ပါဝါအသုံးပြုမှုအတွက် USB နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Micro SD ကတ်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Audio: Three 2” (51 mm) midrange speakers, one 1” (25 mm) tweeter, one 5.25” (133 mm) woofer with bass aperture to maximize bass output Amplifier: Peak output...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Wifi connectivity: Dual-band wifi supports 802.11a/b/g/n/ac (2.4 and5GHz) networks. Does not support connecting to ad-hoc (or peer-to-peer) wifi networks. Amazon Sidewalk: A shared network that...
Echo Sub Powerful subwoofer for your Echo - requires compatible Echo device
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Audio: 4L sealed chamber with 6” (152 mm) downward-firing woofer, 100W Class D amplifier Low Frequency Response: 30Hz (-6dB) Crossover Frequency: 50 Hz - 200 Hz adaptive...
Anker SoundCore Select Bluetooth Speaker with Two 6W Drivers, BassUp (Blue)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Speaker Type: Powerful Stereo Sound Item Weight: 365g / 12.9oz Driver Output: 6W x2Manufacturer: Anker Bluetooth Version: 4.2 Battery Capacity: 4400mAh Bass Boost: Passive Radiator Charging time:...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: SRS-XB13 Compact size and multiway strap Enjoy powerful sound with EXTRA BASS Sound Diffusion Processor createsafurther sound spread Waterproof and dustproof with IP67 rating...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Connectivity Technology: Bluetooth, HDMI Speaker Type: Soundbar Brand: JBL Model Name: JBL Bar 2.0 (2019) Total Power: 300WProduct Dimensions 33.66 x 5.71 x 4.92 inchesItem Weight 3.55...
Remax RB-M28 Pro Waterproof Bluetooth Speaker (Blue)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: RB-M28 Pro Material:Plastic+Silica gel+Fabric Bluetooth V5.0 Support: HFP HSP A2DP AVRCP TWS Battery: 3600mAh, Voltage: 3.7V Operating distance: ≤10M (free space) Charging Time: 4.5H, Play time:...
Remax RB-M28 Pro Waterproof Bluetooth Speaker (Black)
FANTECH Resonance BS150 Bluetooth Speaker (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: BS150 Warranty: 1 Year BLUE LED LIGHT Battery up to 30 hours (1200mAh) Dual Speaker + Dual Bass Membrane | 45mm Driver Unit Mode : Bluetooth...
Tronsmart T2 Plus Portable Speaker
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ #Tronsmart T2 Plus ကတော့ ရေစိမ်ခံ IPX7| Output 20 Watt နဲ့ ' Indoor မှာ Stereo Beat အငြိမ်လေးတွေ ဘက်ကိုလည်း သွားလို့ရမယ်။ Outdoor ဆိုလည်း Ultra Deep Surround System ဆိုတော့ ဘော်ဒါတွေ နဲ့ အသေးစား Pool PARTY...
JBL PRX835W 15-Inch Three-Way Full-Range Main System with Wi-Fi (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Built-in Wi-Fi for wireless control of your system from anywhere in the venue Free PRX Connect mobile app for iOS and Android provides wireless control over volume...
JBL PRX825W 15-Inch Full-Range Main System With WiFi PA Speaker (Black)
JBL PRX815XLF 15-Inch Low-Frequency System with WiFi PA Speaker (Black)
JBL PRX418SD 18-Inch High-Power Subwoofer (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Frequency Range (-10 dB): 35 Hz – 250 Hz Frequency Response (±3 dB): 52 Hz – 120 Hz Input Connection Modes: +1/-1 Recommended Crossover: 80 Hz, 24...
JBL PRX425D 15-Inch Two-Way Loudspeaker System (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Dual 15" two-way design 90° x 50° coverage Heavy Duty 16 gauge protective screen backed steel grille Tough DuraFlex™ enclosure finish SonicGuard™ protects the highfrequency driver from...
JBL PRX415MD 15-Inch Two-Way Stage Monitor and Loudspeaker System (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 90° x 50° coverage Dual-angle pole socket for applications requiring tripod mounting Heavy Duty 16 gauge protective screen backed steel grille Tough DuraFlex™ enclosure finish SonicGuard™ protects...
JBL PRX412MD 12-Inch Two-Way Stage Monitor and Loudspeaker System (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 90° x 50° coverage for even and smooth response on and off axis Dual-angle pole socket for applications requiring tripod mounting Heavy Duty 16 gauge protective screen...
JBL IRX112BT 12-Inch Portable PA Power Speaker With Bluetooth (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Authentic 12-inch JBL woofer Four real-world EQ presets take the guesswork out of optimizing sound dbx AFS2 Automatic Feedback Suppression stops feedback before it starts Bluetooth integration...
JBL PRX318SD 18-Inch Compact Subwoofer System (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ System Type: 18" compact subwoofer Frequency Range (-10 dB): 38 Hz – 300 Hz Frequency Response (±3dB): 47 Hz – 300 Hz Sensitivity (1w@1m): 96 dB SPL...
JBL IRX108BT 8-Inch Portable PA Power Speaker With Bluetooth (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Authentic 8-inch JBL woofer Four real-world EQ presets take the guesswork out of optimizing sound. dbx AFS2 Automatic Feedback Suppression stops feedback before it starts. Bluetooth integration...